ပန်းသီးဝယ်ရင်သတိထား | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Food, Drink & Recipes » ပန်းသီးဝယ်ရင်သတိထား
Posted by Novy on Nov 6, 2012 in Food, Drink & Recipes | 40 comments
ပန်းသီးပုံးလိုက်ဝယ်မယ်ဆိုရင် သတိထားဖို့နဲ့ သိထားစရာလေးတွေကို
ကိုယ်တွေခံခဲ့ရလို့ ရွာသူားတွေကိုလည်း နိုဗွီလို မအေး၂ခါမနားရလေအောင်
ကန်တော့ရမဲ့လူကြီးတွေများလွန်းလို့ ပန်းသီးနဲ့ ပန်းသစ်တော် ပုံးလိုက်ဝယ်မှအစဉ်ပြေမယ် ဒါကြောင့်မို့ ပြီခဲ့တဲ့ စနေနေ့ညနေက
သီရိမင်္ဂလာဈေးကို ရောက်ခဲ့တယ်ပေါ့ အရင်တုံးကလည်း ၁နှစ်ကို ၂ခေါက်လောက်တော့ ပုံးလိုက်ဝယ်ဖြစ်ပါတယ်
အခုလို အဖြစ်မျိုး မကြုံဘူးပါဘူး
ပန်းသီး ၁ပုံးကို ၂သောင်း ပေးရပါတယ်
အကန့်၎ကန့်ပါတယ် တစ်ကန့်မှာ ၁၅လုံးပါ
အပေါ်ကန့်ကို ဖွင့်ပြတယ် အပြည့်ပါတယ် အောက်မှာလဲဒီအတိုင်းပဲလို့ပြောတယ်
အိမ်ရောက်တော့ ပုံးကိုဖွင့်ပြီးကတော့ဖို့အတွက် အလုံးတွေကို ထုတ်တော့မှ
ဒုတိယ အကန့်မှာ ၆လုံးရော့နေတယ်
စိတ်တော့တိုသွားတယ် ပြီးတော့မှ ဒီလောက်နဲ့တော့ ကိုယ်လည်းမွဲမသွားပါဘူးလေးဆိုပြီး
အချိန်ကြည့်လိုက်တော့ ည၉နာရီထိုးနေပြီး ဒီညတော့ သွားလို့မရတော့ဘူး
ကားဆီကုန်ရင်ကုန်ပလေ့စေ မနက်ကျမှာ သွားကိုပြောပြစ်မယ်ဆိုပြီး
အသီးပုံတွေကို ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီး ပုံးထဲကို ပြန်ထည့်ထားလိုက်တယ်
သီရိမင်္ဂလာဈေး (ခ) ရုံ – အောင်ဇေယျ သစ်သီးဒိုင်ကို သွားပြောတော့
တခဲ့ သစ်သီးဒိုင်ကြီးတွေဖြစ်ပြီး ဒီလိုမျိုး တစ်နပ်စားမကြံသင့်ပါဘူး
ဒါမှ ၀ယ်တဲ့သူကလည်း စဉ်းစားချင့်ချိန်ပြီး ဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာကို စဉ်စားနိုင်မှာပါ
ဒီအမျိုးအစားက မပြည့်ရင် တခြားအမျိုးအစားကို ပြောင်ဝယ်ဖို့ စဉ်စားမှာပါ
ပြီးတော့ အခုလိုမျိုးလည်း ပြန်သွားပြောဖြစ်မှာ မဟုတ်ပါဘူး
သူတို့တွေရဲ့ တနပ်စားအကြံကြောင့် ၀ယ်ယူသူတွေ စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်ရပါတယ်
သူတို့လဲဒီလိုပဲဝယ်ရတယ်တဲ့ မတက်နိုင်ဘူးတဲ့ဆိုတဲ့ စကားတစ်ခွန်းနဲ့
ကျမမှာတော့ ဆီကုန်လူပန်း အလုပ်ပျက်တာပဲ အဖတ်တင်ခဲ့ပါတယ်
ကျမလိုမျိုး မိအေး၂ခါမနာရလေအောင် သတိပေးရင်နဲ့…
ဟယ်… အဲလိုလဲ ရှိတာဘဲလား မနိုရယ်…
လူတွေ… လူတွေ… ကိုယ့်ကျင့်တရားတွေ တော်တော်ပျက်သုန်းနေကြပီ…
ဟင် ။ စိတ်ကုန်စရာ။
မနိုရေ နောက်တစ်ခုက ပန်းသီးစားရင် အခွံခွါစားတဲ့ဗျာ။ ကြာရှည်ခံအောင် ဖယောင်းတင်ထားတတ်တယ်လို့ ပြောနေကြတယ်။
အရင်က အဖေသင်ဘူးတာ ပန်းသီးခွံက ဆေးဖက်ဝင်လို့ အခွံပါစားတဲ့။
တခါလေ မနိုလဲ ပန်သီးကို အလုံးလိုက်ကိုက်စားရတာကို
သဘောကျတဲ့သူဆိုတော့ နောက်ဆိုရင် ရှောင်ရမှာပေါ့နော်
ပုံးထဲ က ပန်း သီး အခု မှမြင်ဖူးတယ်။ အဲလို အကန့် တွေ ခွဲ ထားတာဆိုတော့ အပြည့် မပါရင် သိသာ တာပေါ့ ။ ၊ အပြည့် နဲ့ အလျော့ နဲ့ ၀ိတ် အများ ကြီး ကွာ လောက်တာ ကို သူတို့ မသိပဲ မနေ ပါဘူး ။ တခါတလေ ၀ယ်တဲ့ သူမို့ အဲဒါမျိုး ထည့် ပေးလိုက် တာ ဖြစ်မယ်။ ပြန်ရောင်း မယ့် သူဆို သူတို့ ဖောက်သည် ပျက် မှာ စိုး လို့ အဲ လို လုပ်လို့ ဘယ် ရ မလဲ။
မြန်မာပြည်မှာ လဲ တနပ်စား အကျင့် တွေ ဘယ်တော့ မှ ပျောက်မလဲ မသိ။
အလုံးကြီးလို့ကွာရင် ၃ -၄လုံးလောက်ပဲကွာတယ်တဲ့
တမင်လျော့တဲ့ဟာကို ရောင်းတာပါ … သူတို့ဝယ်စဉ်ကတည်းက အဲသလိုတော့မဟုတ်တန်လောက်ပါဘူး … ဒါကြောင့် ဘာပဲလုပ်လုပ် အလုပ်ရှုပ်ခံ အပင်ပန်းခံပြီး စစ်ဆေးတာအကောင်းဆုံးပါပဲ …….
အရင်နှစ်တွေက မဖြစ်ဘူးတော့ မထင်ထားဘူး
ဟုတ်တယ် ခိုင်ဇာပြောသလိုပဲ အမလဲ ကြားဖူးတယ်.. အခုဆို ပန်းသီးခွာရမှာပြင်းတာနဲ့ ရေဆေးပြီး ကိုက်စားတတ်တဲ့ အကျင့်ကို အတော်ဖျောက်နေရတယ်…
ခုလိုဆို Centre ရှေ့မှာ ၀ယ်တာကမှ သက်သာဦးမယ်နော်…
မိုက်မိုက်ရိုင်းရိုင်းကိုလျော့တာပါပဲလား novy ရေ အခုလိုသတိပေးတဲ့အတွက်
ကျေးဇူးပါ လူတွေလည်းကြာလေမသမာလေပဲနော် ………..
မနိုရေ မူစယ်ဘက်က ၀ယ်လာတာတောင် အောက်ဆင့်တွေမှာ မလျော့ပေမဲ့ အလုံးတွေက မလှမပနဲ့ သေးသေးလေးတွေ ထည့်ပေးလိုက်တာပါ။ အပေါ်ဆင့်ကတော့ လှမှ လှ ကြီးမှ ကြီး ။ ဒီရောက်တော့ လက်ဆောင်ပေးမယ် လုပ်တော့ မျက်နှာပန်းမလှတော့တာနဲ့ ပြန်အစားဝယ်ပေးရပါတယ်။
ဘာပဲ ၀ယ်ဝယ် ဘယ်နေရာကပဲ ၀ယ်ဝယ် ခုတော့ တတ်နိုင်သမျှ စစ်ပါတယ်။ခံရပါ များလို့ သူတို့ က သင်သွားတာပါ။ မေမြို့ က စတော်ဘယ်ရီ ခြင်းတွေ ဆို ခဏခဏပါ။ ကိုယ်က သတိတချက်လွတ်လိုက်တာနဲ့ သွားပါလေရော။ ငါးချဉ်တွေ တုန်းကလည်း ခံရပြီးပြီ။
ဘယ်အချိန်ကျမှ စိတ်ချလက်ချနဲ့ ၀ယ်လို့ ရမလဲ မသိဘူး အမရေ။
မနိုလည်းကိုက်စားတတ်တဲ့ အကျင့်ကို ဖျောက်ရမယ်
ဟုတ်တယ် နောက်ဆိုရင် center ရှေ့မှာပဲဝယ်တော့မယ်
အလုံး၆၀ မှာ ၁၅လုံးရော့တော့ တော်တော်တင်းပါတယ်တော်
ကိုယ်တွေကတော့ စစ်ဆေးလွန်းလို့ လူမိုက်ကြီးကို ဖြစ်နေတာပါပဲ
ဒီလိုပြန်မျှဝေတော့ ကျန်တဲ့လူတွေလည်း အလိမ်မခံရတော့ဘူးပေ့ါ။
ကျမလည်း မတရားခံရတယ်ထင်ရင် ပြန်ကို ပြောလိုက်ရမှ ကျေနပ်တယ်။
အဲဒီစိတ်နဲ့ကို ဟိုတလောက လူအားပြီး စိတ်မအားလို့ ရွာထဲတောင် သိပ်မ၀င်ဖြစ်ဘူး ဖြစ်သွားသေးတယ်။
ရွာထဲမှာ ရင်ဖွင့်ဖို့ကျတော့လည်း ရခိုင်အရေးတွေနဲ့ ရှုပ်သွားမှာစိုးတာနဲ့ မတင်ဖြစ်ဘူး။
ဒါပေမယ့်လည်း အမှတ်အသားမရှိတဲ့ စိတ်က ခုတော့လည်း ဘယ်လိုမှမခံစားရတော့ဘူး။ :hee:
ရွာသူပီပီပါပဲတော်. သူတို့ကိုပြန်ပြီးသွားမပြောရရင် ထမင်းတောင်စားလို့ဝင်မှာမဟုတ်ဘူး
ပြီးတော့ သူများတွေလည်းကိုယ်လို့ မခံရတော့ဘူးပေါ့
မနိုဗွီရေ တစ်ခါတုန်းက ဘုန်းကြီးကျောင်းအလှုရှိလို့ မဒမ်ခင်ခ ပန်းသီးပုံးလိုက်ဝယ်မိပါတယ်
အောက်ပိုင်းအလွှာကပန်းသီးတွေက အနာတွေများလို့ အလားဟသတ်ဖြစ်ကထဲက
ပန်းသီး၊ သစ်သီးဝယ်ရင် တစ်လုံးခြင်းရွေးပြီး ဈေးဆစ်လို့သာ ၀ယ်တော့တယ်ဗျာ။
အခုလိုသိရတာ ကျေးဇူးပါ မနိုရေ…
သတိထားပြီးသေချာ ကြည့်ရတော့မယ်နော်… ကိုယ်ကတော့ သူတို့ကိုမသင်္ကာစိတ် မဖြစ်ဘဲနဲ
ယုံကြည်လိုက်တာလေ… သူတို့ကတော့ အမျိုးမျိုးလိမ်နေတော့တာဘဲ…
ခုခေတ်လူတွေက ကလိမ်ကကျစ်မကျရရင် ခေတ်မမီတော့ဘူးများ ဖြစ်နေကြလားမသိဘူး… အဲ့ဒီနည်းနဲ့ရတဲ့ပိုက်ဆံကို စားရဲကြတာလည်း အံ့သြပါရဲ့… အကျင့်တွေလည်းပျက်၊ ခေတ်လည်းပျက်…
ပြန်မျှဝေတာ ကျေးဇူးပါနော် မနို…
novy ရေ သူများက ကုသိုလ်လုပ်မှာကို ..သူတို့ မို့အကုသိုလ် ယူရဲကြတယ်နော်..ခက်ပါ့
ဒါမျိုးတွေက ဒီမှာတွေလဲ ရှိပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ မတော်တဆ ပေါ့။
နာမည်ကြီး စူပါမာကက် တွေမို့ နာမည်ပျက်လုံးဝ မခံပါဘူး။
မဟုတ်တာ မလုပ်ဘူး ဆိုတာ ယုံကြည်နေသမျှ ဖောက်သည် တွေ ရှိနေတာပါဘဲ။
ဈေးသည် ဆိုတာ နာမည်က အလွန် အရေးကြီးတယ် ဆိုတာကို မသိလောက်အောင်ကို လောဘ တွေ များနေတာ စိတ်မကောင်းစရာပါဘဲ။
ရှေးကတော့ ကုန်သည်ဆိုတာ နာမည်ပျက်မှာ အရမ်းကြောက်ကြတာ။
အရောင်းအဝယ် မှာ အပြိုင်အဆိုင် နာမည်ကောင်း ယူရမဲ့အစား အပြိုင်အဆိုင် အလွယ်နည်း ယူနေတော့ ခက်သားကလား မနိုရေ။
နောက်ဆိုရင် ကိုယ့်ဘက်ကလဲ အားမနာတမ်း စစ်ဆေးပြီးမှ ဝယ်ဖို့ သင်ခန်းစာပေါ့။
ကိုယ်ကခေတ်ကို အမှီလိုက်နေတာတောင် ခံလိုက်ရပါတယ်
ဒီမှာတော့ အလကားပေးဖို့နေနေသာသာ လူကိုမရိုက်လိုက်တာတောင်ကံကောင်း
ထီပေါက်တယ် လို့ ခေါ်တယ်
စားသောက်ကုန် ၊ ကုန်ပစ္စည်း ပါကင်လိုက်ဝယ်ရင် တော်တော်များများဟာ စိတ်မချရတာမို့(အထူးသဖြင့် မိတ်အင်ချိုင်းနား)
အကောင်းဆုံးကတော့ ကိုယ့်မျက်မြင်တွေ့ ရတဲ့ ဟာ မျိုးပဲ ဝယ်တာအကောင်းဆုံးပဲ ဗျို့ 
နည်းနည်း ပါးပါးဆို တော်သေးရဲ့ ..
(ထပ် မပြောချင်တော့ပါဘူး။ ဒါတွေ ပြောရင် ဒေါတွေ ပါကုန်မှာ စိုးလို့)
နောက်များ ဝယ်ရင် သတိထားရဦးမယ်ဗျ ..
သတိပေးတာ ကျေးဇူးပါ …
မနုိုက စာမှ သေချာမဖတ်တာ
နယူးဇီလန်တို့ အောစတေးလျ တို့ ကလာတဲ့ အရောင်မဲမဲနဲ့ အမျိုးက
တန်ကြေးပေးပြီး တန်ကြေးတိုင်းမရတာကတော့ ဟိုအတိတ်ကကံဒေဘော့ဗျာ
သူ့အတွက်ရည်စူးပြီးဝယ်တာ မပြည့်ဘူးဆိုတော့ သူလည်းကံအကြောင်းစက်ဆပ်သပေါ့
စိတ်မကြီးဇမ်းဘာနဲ့ ဘယ်သူမပြုမိမိမှု့ ငါ့ ကိုအကြောင်းပြုပြီးဖြစ်တဲ့အမှု့ ငါ့ကြောင့်လို့တွေးဇမ်းဘာ
( မိတ်အင်ချိုင်းနား) ဆိုဒီလိုပဲတဲ့
မနိုလည်းပြန်ပြောခဲ့တယ် ဒီလိုလျော့တယ်ဆိုရင် မ၀ယ်ခင်ထဲကပြောပြသင့်တယ်လို့
ဟိုဘ၀က သူများကို ကိုယ်လိမ်ခဲ့လို့ဒီဘ၀မှာ ကိုယ်လည်းအလိမ်ခံရတာလို
တရားသဘောကို ဆင်ခြင်ရင် ဒေါသများကို ရေနွေကြမ်းနဲ့ မျိုချလိုက်ပါတယ်ရှင်
ကိုယ်လဲ တရုတ်စာမတတ်တော့ ဒီလိုဘဲလျောက်ပြောရတာပေါ့အေ့
တော်သေးတာပေါ့ ပုရစ်ရော အိမ်ရောက်တော့ ပြန်ရေကြည့်သေးလား ရော့မရော့
ဒီနှစ်မဒမ်ပေါက်က ပုရစ်ကြော် မကျွေးဘူးအေ့ ဒီနှစ်
ဂျူးမ လည်း တစ်ပတ်ကျော်လောက်က သီရိမင်္ဂလာဈေးမှာ ပန်းသီး တစ်ပုံးဝယ်လိုက်တာ..
အဲလိုပဲ ..(၅) လုံးလောက်လျော့လာတယ်… ကိုယ်ညံလို့ ခံလိုက်ရတာဆိုပြီး
ရှက်လို့ ဘယ်သူ့မှကို မပြောဖြစ်ဘူး… ခု မနိုပြောမှပဲ သူတို့ က လုပ်စားနေတာပဲ ဆိုတာသိလိုက်ရတာ…
အော် အနိစ္စ …
အရင်တစ်ပတ်က အိမ်မှာလဲအမေ့ရဲ့မကျေနပ်သံတစ်ချက်ကြားလိုက်ရတယ် ၄ လုံးရော့လို့တဲ့။ Novy ထက်စာရင်အမေကတော်သေးတာပေါ့။ ဒီညမပြန်ပြီးပြောပြလိုက်အုန်းမယ်။
9000 တောင် နစ်နာသွားတယ် ၁၅ လုံးဆို …း( … အဲ့လိုလူမျိုးတွေများနေလို့ လောကကြီးက မသာမယာနဲ့ စိတ်ပျက်စရာကောင်းနေတာ …
ကျုပ်တို့ကတော့ တစ်လုံးနှစ်လုံလောက် ပဲဝယ်စားတာဆိုတော့
အဆင်ပြေတယ် ဂျင်းထည့်လို့ မရတော့တာပေါ့ဗျာ။
ဒါပေမယ့် ဖာလိုက်ဝယ်စားတဲ့ လူတွေအနေနဲ့ကတော့ သတိထားသင့်တယ်ဗျို့
ကုန်စိမ်းဈေးတွေက မျက်နှာပြောင်တယ် အကြောတင်းတယ် ဒီလိုပါပဲ..။
ကျုပ်လဲ စပျစ်သီး ပန်းသီး ပုံးတွေ ခဏခဏ ခံရပါတယ်။ ယောက်ျားဝယ်တော့ အချဉ်ဖမ်းလို့ပိုကောင်းတာပေါ့။
ဒါထက် ပန်းသီးကို အခွံပါကိုက်မစားရမှဖြင့် ဘယ်စားလို့ ကောင်းတော့မလဲ…
တဂျွမ်းဂျွမ်းနဲ့ကိုက်ပြီး အရည်တွေစီးမကျအောင်ထိန်းပြီး အားပါးတရ၀ါးစားရတဲ့အရသာကသပ်သပ်
အာဒမ်ကို ဧဝက ပန်းသီး အရှာခိုင်းလို့ လောကဂျီး ပျက်ဆီးခဲ့ရသလို ဦကြောင်ကို ရေထဲဆင်း ငါးရှာခိုင်းပြီး ထွက်ပြေးသွားတဲ့ မုဆိုးတဗိုင်း မိန်းမရိုင်း အသဲစား ဘီလူမဂျီး နိုဗွီ့ကို သိပ်မုန်းတယ်..။ လမ်းတွေ့ရင် မခေါ်နဲ့၊ အကြွေးကို ဘဏ်အကောင့်ထဲ ထည့်ပေးပါ။ :buu:
မနိုရေ .. အဲ့ဒီ သစ်သီးဒိုင်ဆိုင်တွေလေ .. တဆင့်ပြန်ရောင်းတဲ့ အညာသူမတွေနဲ့ပဲ ကိုက်တယ်သိလား … ။
ဟိုအညာသူမတွေက … စေ့စေ့ပေါက်ပေါက်ကို ပုံးတိုင်း အကန့်တိုင်းဖောက်ကြည့် မကြိုက်လျှင်လဲသေးတယ် အဲ့လို လုပ်ပြီးဝယ်တာ …. ။ အခုမနိုအဖြစ်က သွားလည်းပြောရသေးတယ် …. ဘာမှလည်း ပြန်မရဘူးဆိုတာကတော့ … သိပ်မမိုက်ဘူး … ။ ဒိုင်ဆိုင်တွေ လူလည်ကျတယ် … ။
ပြောဖို့မေ့သွားလို့.. တရုတ်သဗုံ ကြေးမုံဂျီးလက်ချက်နေမှာ..။ တရုတ်နယ်စပ်မှာ ဒင်းသောင်းကျန်းနေသတဲ့…။ :harr:
တို့ကတော့ အိမ်ကဟာကြီး(သူမသိအောင်ရေးတာနော် မဖွကြေး)ကျွေးတာပဲစားတော့